नेपालमा बल्ल सरकारले ल्यायो कडा कानुन, करणी गर्नेलाई मात्रै होइन, घटना मिलाउनेलाई समेत यस्तो छ जेल सजायँ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपालमा बल्ल सरकारले ल्यायो कडा कानुन, करणी गर्नेलाई मात्रै होइन, घटना मिलाउनेलाई समेत यस्तो छ जेल सजायँ!
काठमाडौ । क’रणी घटना दिनहुँ बढ्दै जान थालेपछि यस सम्बन्धी कानुन क’डा बनाउनुपर्ने माग बढेदै गएको थियो । यस्ता घटना सम्बन्धी कानुनलाई क’डा पार्ने अध्यादेश आइतबार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। अध्यादेशमा यस अघि कानुनमा भएका कुरा भन्दा क’डा सजायको ब्यवस्था गरिएको छ ।अध्यादेशमा यस्ता घटना मिलापत्र गराउनेलाई समेत क’डा सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । समाचारका अन्य भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश परित गरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाङफेले जानकारी दिइन्। मिलापत्र गर्नेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तिलाई थप सजाय पनि छ । मन्त्री शिवमायाका अनुसार त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति त्यस्तो घटनामा परेमा १२ देखि १४ वर्ष हुने कैद सजायलाई बढाएर १२ देखि १६ वर्षसम्म पुर्‍याएको छ भने १६ देखि १८ वर्षको व्यक्तिलाई १० देखि १२ वर्षको कैद सजायलाई बढाएर १० देखि १४ वर्षसम्म पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै अध्यादेशमा १८ वर्षभन्दा माथिकालाई अ’नैतिक कार्य गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर १० देखि १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अध्यादेशले दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ।